कथाः डहरतिर | साहित्यपोस्ट
प्रकाशित १८ जेष्ठ २०७८ ०६:०१
कति खाने कोदाको ढिँडो ! भर्खर किनेको खेत ।
भदौको महिना, बेस्सरी पोल्ने घाम । खेतका धाँजा फुटेका ।
खेतमा पानी हालेर फर्किँदै थियो सिराने कान्छा । उमेरले बिस काट्यो । बिहे भएको छैन ।
खेतबाट त सात नबज्दै हिँडेको हो । भोकले गर्दा एक घण्टै लायो उक्लिन । गाउँ नआउँदै रात पऱ्यो ।
पुछारे लाहुरेको घरमा आइपुग्दा घर सुनसान थियो । सायद खानासाना खाएर सुतिसकेका थिए । आखिर रातमा गर्न मिल्ने काम के थियो र ? डाम्लो–नाम्लो त माहारामै पनि भैहाल्थ्यो । अरू गर्न बिजुली बत्ति थिएन । ढ्याबुरीमा के गर्ने ? मट्टितेलको नाश मात्रै ।
डहरमा आइपुग्दा ढोका खुल्यो–घऱ्याक्क । उभियो ठिङ्ग । भित्रबाट एकजना केटी मान्छे निस्की । खुमा रहिछ । उसले अँधेरो भएपनि चिन्यो ।
चिन्न पनि किन नचिन्नु ? उसले सबैभन्दा मन पराएको मान्छे पो त !
पारिको स्कुलमा पाँच पास गरेकी । चिटिक्क परेकी । सानैदेखि उसले मन पराएकी । साइनोले खास
नजिकको नाता नपर्ने । सानोमा सँगै खेल्ने सँगै हाँस्ने साथी ।
खुमा आँगनमा आई । टुक्रुक्क बसी । खुइय्य गरी । गोन्या सोकोटी (गुन्यू मिलाई) । “हा थु” गरेर भित्र गई ।
देखेको यत्ति हो उसले तर मुटु भने फुट्लाजस्तै भयो । कान तातो भयो । पसिना आयो ।
त्यसपछि चितुवाजस्तो उकालोमा उक्लियो एक्लै “डछाप–डछाप” ।
घरपुग्दा सबै सुतिसकेका थिए । छुर्गन (तामा)झोलसँग आटो खायो सुरुपसुरुप ।
छामछाम–छुमछुम गर्दै ओसारीमा गएर खुमालाई सम्झिँदै सुत्यो ।
त्यसैगरी खेतमा पानी लाएर फर्केको तर आज रात परेको हैन–पारेको ।
आँगनमा आएर उभियो ठिङ्ग ।
तर खुलेन ढोका । निस्किइन खुमा ।
आधिघण्टा सम्म चुपचाप कुरिरह्यो । बोलाउने हिम्मत पनि भएन, मन त थियो नि खुमा भनेर चिच्याउन ।
हिँड्ने सुर कस्यो ।
त्यत्तिकैमा खुल्यो ढोका । निस्किई खुमा ।
आँगनमा आई । टुक्रुक्क बसी । खुइय्य पारी । गोन्या सोकोटी । एकछिन् उभिई । के भएछ कुन्नि ? चप्पल खोज्न ढोकामा गई । अनि डहरतिर निस्किई ।
खुमा आफूतिर आएको देखेर ऊ आत्तिन थाल्यो । भाग्न खोज्यो तर भाग्न पनि सकेन । के गरौँ के नगरौँ भयो । सास रोकेर बसिरह्यो ।
धन्नै ठोक्किएकी खुमा । झसङ्गै भई । आत्तिएर “मोइ” (आमा) भन्न “मो…” भन्न नभ्याउँदै कान्छाले च्याप्पै समात्यो । अनि मुख थुन्दियो ।
“ङा आला खुमा, सिरान्या कान्छा ।” उसले सुस्तरी भन्यो ।
“कुलाक ह्वाच इसबेला ?डासो,”खुमाले भनी । फुत्किन खोजी । सकिन ।
“तँलाई भेट्न आएको,”उसले भन्यो ।
“नाडुपा खुप !”
“भेटाएँ भो ।”
खुमालाई के गरौँ के नगरौँ भयो ।
“तँ कता हिँडेको त ?”सोध्यो कान्छाले ।
हिँडेको त हग्न हो तर भन्नु भएन ।
“होडिकै” खुमाले भनी ।
“यस्तो राति पनि कोही त्यत्तिकै हिँड्छ ?”
बोलिन खुमा । बिस्तारै जाडाले हो कि केले हो, काम्न थाली ।
“हि छाना ?”
“डर लाग्यो !”
“मसँग के को डर ?”कान्छा साख्खै पल्टियो ।
“जाडो भयो ।”
“पर्दैन । जा भनेको । अहिले अरूले देखे भने ?”
“के हुन्छ र ?”
“खै डासो ।”
“छोड्दिन ।” कान्छाले कुरा लम्ब्यायो, “ङै काट कुरा टेलाङ ।”
“भन् के कुरा ?”
“मलाई रुचाउँछस् ?”
“राम्रो छैन ?”
“मैले त्यसो भने छु र?”
“अनि किन रुचाउन्नस् त ?”
“मसँग मिल्छस् कि नाइँ?”
“किन ?तँ अरूसँग मिलेछस् र ?”
“मैले मिलेछु भनेछु र ?”
“किन मान्दैनस् त ?”
“भोलि राति निस्किन्छस् कि नाइँ ?”
“पिसाब लाग्दैन र ?”
“राहाडल कि मो ?”
उसले फुस्किन अरू बाटो भेटिन । भोलि आउने नआउने भोलिको कुरो । जेसुकै होस्, “आउँछु” भनी ।
यही सुन्न चाहेको थियो कान्छाले । छोडिदियो खुमालाई । त्यसपछि छुट्टिई ।
घरमा बोइले (बाले) ख्याल गरेका रहेछन् । सोधे, “कहाँ गएको थिइस् ?”
भनी, “पेट दुखेको छ । हग्न गाको ।”
डहरमा आइपुग्यो सिराने कान्छा । त्यसैगरी उभियो ठिङ्ग । त्यसैगरी ढोका खोलेर आइपुगी खुमा । अलिकति लाज, अलिकति डर लिएर । पछ्यौरी पनि ओढेकी थिई ।
“मैले तँलाई रुचाउँदिनँ ।” खुमाले सासमा भनी ।
आखिर खुमाले रातभर–दिनभर सोचेर राखेको उत्तर यही न थियो । कान्छालाई रुचाउनुपर्ने कारण केही भेटेकी थिइन । ऊसँग गए जुनी ठिकैसँग बित्ला भन्ने त सोचेकी हो तर त्यत्तिमै हुन्छ भन्नुपर्ने ठाउँ देखेकी थिइन ।
कतै ऊ बिहेपछि भर्ती हुन जान्छ कि भन्ने शङ्का थियो । सानैमा आमाको एक्लो जीवन देखेकी खुमा, आफू त्यस्तो कथा दोहोऱ्याउन चाहँदैनथिई तर उसका बोइमोई भने लाहुरेलाई नै भान्जा बनाउने सोचमा थिए ।
“किन ?किन रुचाउँदैनस् ? किन मिल्दैनस् ?”
“किनसिन जान्दिनँ ।”
“हामी सानोछँदा ससँगै खेल्थ्यौँ । मैले जे भनेपनि मान्थिस् ।” कान्छाले भन्यो ।
“केटाकेटीको कुरा छोड् । अब म केटाकेटी छैन ।”
“मसँग बिहे गर्छु भन्थिस् ।”
“तँलाई कतिचोटी भन्नुपर्छ ?”
“म पाए कोही चाहिँदैन भन्थिस् ।”
“केटाकेटीको कुरा नगर् ।”
कान्छाले अपाइँडे–अपाइँडे कुरा गर्न खोजिरहेको थियो । के उसले रक्सी खाएको थियो ? जरुर खाएको थियो तर मात्ने गरी हैन । बिहान आमाले बोत्तलमा हालिदिएकी थिइन् । दिउँसो खानहुन्छ भनेर । “पिओर” कोदोको । साथमा पिसेको नुन–खुर्सानी र धार्नाएकको काँक्रा ।
खुमाकी बोइलेले मान्छे बोलेको सुनिबसेका रहेछन् ।
आँगनमा निस्केर कराए, “को कुकुर–कुकुर्नी हो काइँकाइँ गर्दै बसेको ?”
डराई खुमा । समाती कान्छालाई चराप्पै ।
“खुमा…खुमा…। कता मरिस्?दुखेको पेट त्यही हो ? कुन कुकुरको पछि लागिछस् ?”बा झन् कराए । कुकुर भुक्यो “हुहुहुहु …।”
आएन जबाफ ।
“खुरुक्क आउँछस् कि ढुङ्गाले हानौँ ?”
यति भन्दा पनि आइन खुमा, न आयो जबाफ ।
बाले आँगनको एउटा ढुङ्गा टिपे । अनि डहरतिर हाने ।
प्वाक्कै पऱ्यो कान्छाको निधारमा । धरधरी रगत आउन लायो । आत्तिई खुमा । अँधेरैमा बोकेझार खोजी । थुक हालेर मिची । घाउमा लगाइदिई । रगत पुछिदिई ।
बा केके फलाक्दै–चिच्याउँदै थिए ।
खुमा घरतिर फर्किन खोजी । कान्छा टाउको समातेर बसिरह्यो । केही भनेन । दाहिने हातले रगत पुछ्यो, देव्रे हातले सिँगान ।
अलिपर पुगेर फर्केर हेरी । मनमा माया भरिएर आयो । आँखामा आँसु भरियो । फर्केर कान्छानिर आई ।
कान्छाको हात समाती । अनि कान्छालाई उठाई र डहरलाई त्यहीँ छाडेर मूलबाटातिर निस्किई ।
“जाँठ्ठा ग्वा, फ्याक्के बेर । राङ्सिलै आह्लमो भ्या ।” (जाँठ्ठा चल्ला कोरल्न बेर । स्यालले लैसक्यो ।) बोइले बिहान उठेर पटाहामा (पिँडीमा) बस्तै भने ।
मोई कुनातिर बसेर रुन थालिन् ।
यसैगरी तीनदिन बित्यो । घरमा न राम्रोसँग बोलचाल भयो, न खानपिन । न त कामकाज नै । घरै अस्तव्यस्त भयो ।
आज भने बोइले माझघर गएर एकपाथी रक्सी पैँचो मागेर ल्याए । उनलाई थाहा थियो, खुमालाई चितुवा बाघले नखाएको भए आज पक्कै बाटो सोध्न आउँछन् ।
नभन्दै झमक्क साँझ पर्दा तीनजना पाहुनाहरू आइपुगे–हातमा एकुन्टा ठेकी लिएर ।
देखेर मोई भित्तातिर फर्किएर रुन थालिन् । बोइ पिर्कामा बसे । दाउरा लिन गएकी कान्छी छोरी नानुमाया डराएर उतै बसी ।
पाहुनाहरू–बाटो सोध्न आउनेहरू अलमलिए । के भनौँ, कसो गरौँ भए ।
मौनतालाई चिर्दै एकजना बोले, “के गर्ने हजुर ! संसारको रीत, हाम्रा बाजेबराजुले मान्दैआएको कुरो । नमानम् कसरी ?”
एकछिन् रोकिएर फेरि थपे, “अजकालाओ जजाको ! हामीले भनेको काहाँ मान्छन् र ? हाम्रो कुजातले हजुरको फूल टिपेछ । टिपिसकेपछि फाल्नु भएन । हेला गर्नु भएन । अब त त्यो फूल हाम्रो भैसक्यो । नमानेर पनि नहुने होला । कि कसो हो खै, हजुर नै भन्नुस् । यी हामी त आएम् ठेकी लिएर । रीत पुगेन कि ? कतै चलन मिलेन कि ? छोराछोरीले नाता लाइसकेपछि सम्बन्ध नै गाँसिइसक्यो । अब जोडिएको साइनोलाई तोड्न पनि त मिलेन । कि कसो भन्नुहुन्छ ?”
छोरी पट्टीकाले बस नभनुन्जेल बस्न नहुने । ठेकी राख्नुस् भन्दासम्म राख्न नहुने ।
निक्कैबेर उभिइरहे । पालैपालो आफ्ना कुरा पनि राखिरहे ।
“हजुर हामीले पनि यसरी नै बाउबाजेलाई दुःख दिएकै हम् क्यारे । उतीबेला उहाँहरूले नमानेको भए कस्तो हुन्थ्यो होला ?हाम्रा छोराछोरी नै कहाँ निस्कन्थे होलान् र ? छोराछोरी नभए हामीलाई पनि किन यस्तो हात जोड्दै हिन्नु पर्थ्यो होला र ?”
अन्ततः बोइले बस्नुस् भने । ठेकी लिए ।
बिहे भयो धुमधामसँग ।
वाक्स्या (सुँगुरको मासु), बारा (बटुक) र रक्सी छ्यालब्याल भयो । नमात्ने कोही थिएन । ननाच्ने कोही थिएन ।
बिहेको भोलिपल्टको रात डहरतिर कुकुर भुक्यो बेस्सरी । सायद खलिहानतिर फालिएका बारा र हड्डीका टुक्रा खोज्न आएका होलान् कुकुरहरू ।
“के भएछ यो कुकुरलाई पनि ?हेर्न जानपऱ्यो ।” नानुमाया उठी ।
“मापरिसा ! तँलाइ पनि लग्छ र थाहा पाउँछस् ?”बोइले भने ।
सुनेर नानुमाया मरीमरी हाँसी ।
लघुकथा: टिफिन बम